HomeAfaan OromooDuula ijibbaataa daguuggaa sanyii fi sabboonummaa Oromoo cabsuuf godhamaa jiru dura dhaabbanna!
Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Amajji 26, 2020
Dabalataan Kibba Oromiyaa Godina Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaa ganda Jiddoolaatti maanguddoon ganna 75 obbo Tasfaayee Gosaa jedhaman Amajji 16, 2020 waraana mootummaan ajjeefamanii jiran. Achuma aanaa Gooroo Doolaa ganda galaambel keessatti Amajji 22,2020 nami nagaan Sayidoo Baddaa jedhamu waraana mootummaan ajjeefamaniiru. Ajjeechaa kana irrattuu dursa mana jireenyaa obbo Seyidoo Baddaa qabeenya waliin erga gubaniin booda ajjeesanii jiran. Gochaa farra akkanaa kana uummatni irratti dammaqee akka of ittisuu irratti ciminaan hojjechuu qabu gaafanna.
Waggaa kudha lama hidhamtee, umurii dheeraa mana hiraarsaatti sirna EPRDF kanaan kan dabarsite, Waajjira ABO godina Horro Guduruu hogganaa kan jirtu Caaltuu Taakkalee, halkan eda Amajji 25, 2020 waraana mootummaan qabamtee hidhamtee jirti. Caaltuu Taakkalaa hidhaa amma irra gahee jiru kanaan marroo 5ffaa’f sirna kanaan hidhamtee jiraachuusheeti. Waajjira ABO Horro Guduruu Wallaggaa kana keessatti hojii siyyaasaa ABO’n akka hingaggeeffamneef danqaa godhamaa jiru yoo ta’u, hogganoota waajjiricha hedduus qaamni mootummaa adamsaa jira. Dhimma waajjira ABO’n kan walqabatu, waajjirri ABO godinota hedduu keessatti humna waraanaa mootummaan caccabaa ture, hojii siyyaasaa gaggeeffachuudhaaf danqaa guddaa kan ABO tti uume yoo ta’u, dhiyeenyuma kanallee akka uummataan wal argatee hinmariisifneef ABO irra uggurri kaahamaa kan jiru Godina Buunnoo Beddellee keessatti marii hawwaasaa ABO’n saganteeffatee ture qaama mootummaan dhorkamee jira. Dhimma kana fuulleffannaan hordofee uummatni keenya hubachuu akka qabu gaafataa; hidhaaf dararaan akka nurraa dhaabbatuuf, uummatni sirna garboomsaa kana of irraa kaasuuf qabsoo godhu cimsee akka itti fufuu qabu dhaamna.
Amajji 26, 2020